Warshadda Gawaarida Indhoolayaasha Gaarka ah - Soo-saareyaasha Indhoolayaasha Gaarka ah ee Shiinaha, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
Rivet Heerka Caadiga ah
Riigga Indhoolayaasha Gaarka ah
Aluminium Khatimidii End Rivet Indho
Flat Head Full Gexagonal Body Rivet Nut hordhac
Tilmaanta 'Rivet Nut Countersunk Knurled Open End End'
Fur End Flat Madaxa Knurled Body Blind Rivet Nut
Hordhac Laba Jibaar Gacmeed Gacmeed
Hordhac Qoriga Gacanta Keli ah
Wershad tayo sare leh oo biyuhu xireen dhammaad rivets indha la '.
Iyagu waa qiimo jaban, ikhtiyaar waara oo aad u isticmaali kartid meesha walxaha, boolal, ama boolal, ma noqon doonaan miridh ama daaq, kana xoog badan alwaaxda aluminium.
Khatimidii Birta Buuxda ee Dhammeystiran
Dhamaadka siligga siligga silsiladda indhashareerka waa indho sarcaad cusub oo indho sarcaad leh. Ma aha oo kaliya faa'iidooyinka isticmaalka habboon, waxtarka sare, sawaxanka hooseeya, waxayna yareyn kartaa xoogga shaqaalaha, iwm.
Waxay leedahay astaamaha daboolida wanaagsan ee qaybta isku xidhka iyo xoqidda xudunta rivet indho la'aanta ah.
Khatimidii Aluminium ee Dhamaystirka Dhamaystirka Indhoolaha
Aluminium Khatimidii dhamaadka rivet indha la 'waa qaab xiran, sida galaaska ku lifaaqan xudunta u jiidaya rivet pin madaxa madaxa waxaa lagu xiray gudaha madaxa ciddiyaha, rivet jiido waa la dhameystiray, lifaaqan, xudunta u jeex jeexjeexay madaxa of ciddiyaha dabada la jiido by rakibidda dibedda cirifka daloolka, daloolka adoo ku dhejinaya gabi ahaanba waa la xiray si loo noolaado, madaxa ciddiyaha ayaa damaanad qaadi kara baxsi la'aan, baxsi la'aan.
Khatimidii Birta ahama ee Buuxda ee Dhamaadka Indhaha
Rivets waxaa si gaar ah loogu talagalay rakibidda gacanta. Waxaa lagu jiidi karaa godadka guddiga ama qeybta hoose. Waxay ka sameysan yihiin walxaha elastomer-ka waxayna leeyihiin adkeyn wanaagsan. Si dhakhso leh ayaa loogu rakibi karaa xitaa golaha faragelinta.
Dhammaan riwaayadaha indha la'aanta ah ee birta ah waa adag yihiin, waxay leeyihiin xoog is jiidjiid iyo xoog xiirid sarreeya, oo waligoodna ma daxalaysan.
Aluminium Aluminium Dhamaadka Indho Beelka ah
Waa nooc cusub oo dhejis xiiran leh oo aad ugu habboon in la jeexo. Waxay ku tusi kartaa faa'iidooyinkeeda gaarka ah meelaha yar yar ama bay'ada ah iyada oo aan la helin qoriga rivet ama isticmaalka qoriga rivet. Laba ama in kabadan oo iskuxiran ayaa si guul leh loo dhadhaminkaraa iyada oo lagu garaacayo mandrel hal shay sida dubbe.
Multi-Grip Rivets waxay leeyihiin kala duwanaansho ballaaran oo xajin ah, sidaas darteed rivet wuxuu badiyaa beddeli karaa 2 ama 3 rivets caadi ah. Waxay yareyn kartaa tirakoobka iyo qiyaasta shaqada. Waxay ku habboon tahay codsiyada halkaasoo dhumucda walxaha kala duwan ay caadi ahaan u baahan yihiin dhowr cabbir rivet. Xadhiggan ballaadhan wuxuu kordhiyaa dabacsanaanta naqshadeynta wuxuuna yareynayaa tiirarka rivet, oo badbaadin kara lacag badan. Waxay sidoo kale dejinayaan godad aad u weyn waxayna u adkeysanayaan gariirka iyo qoyaanka.
Bixiyaha Buuxa ee Multigrip Blind Full
Full Multigrip Rivets indhoolayaasha ayaa si gaar ah loogu talagalay codsiyada halkaasoo qalabka dhumucda kaladuwan ay guud ahaan u baahan yihiin rivets cabbirro badan leh.
Waxay ka kooban tahay noocyo kala duwan oo xajin ah oo siinaya iyaga adeegsiyo kala duwan oo codsiyo ah. Waxay sidoo kale yareeyn karaan liistada rivet iyo qiimaha iyagoo qaadanaaya booska labo ama kabadan oo cabbir ah "heerka" rivet.
Full Steel-High Blind Rivet Inter-Lock
Dhex-dhex-dhexaad buuxa oo bir-sare ah oo xoog badan oo indha la 'ah ayaa ah qaab dhismeed xoog badan, xajin badan, xirxirayaal quful gudaha ah oo loogu talagalay inay bixiyaan xarkaha iyo xaddiga culeyska. Nidaamka qufulka farsamada gudaha wuxuu bixiyaa 100% mandrel haynta, shaabad u adkaysata cimilada iyo gariir adag oo iska caabin ah.
Full Steel-Xoog-High Blind Rivet Monobolt
Meelaha indhoolayaasha ah ee xoogga badan ee Monobolt ayaa ah qaab-dhismeed sare oo qaab-dhismeed indha-sarcaad leh leh xirmo quful leh iyo buuxinta daloolka wanaagsan ee codsiyada waajibaadka culus.
Riigga Indhoole ee Saddex-laab ah
Tri-Fold rivet indhoole ah wuxuu sameeyaa seddex jeedal oo saxaafadeed dhinaca madaxa xiraya inta lagu jiro dejinta. Jeediyaasha balaastigga ah ee balaastigga ah waxay si siman oo tartiib ah ugu qaybiyaan xoogagga wax isku haysa. Sidoo kale, dusha sare ee jeedalku wuxuu bixiyaa difaac aad u fiican oo ka dhan ah rivet-ka lagu jiido qaybo aad u jilicsan, jilicsan ama jilicsan.
Dhismaha Blind Rivet Hemlock Dhisme Indhoole Dhisme
Cadaadis sarreeya iyo xoog xiirid.
Kala-goysyada gabi ahaanba biyo ma hayaan.
Isku-dhafan oo tayo sare leh, gariir u adkaysta sababa laxiriira mandrel gudaha.
Wuxi Yuke Science Science & technology Co., ltd.